Fiarovana Ireo Anaovana Tsongo Dia Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Fiarovana Ireo Anaovana Tsongo Dia Ao Japana	Voadika ny 13 Desambra 2012 4:18 GMT
Zarao: Nivory ireo vondrona miiasa sivy ambi-efapolo izay manao fanentanana hanafoanana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ary nanao fanambarana miaraka [ja] izy ireo tamin'ny 19 Novambra 2012, miantso ny amin'ny tokony handraisana fepetra hentitra hanampiana ireo iharan'ny herisetra sy hisorohana ny famonoan-tena ataon'ny mpitsongo dia [na mpitsongo dia].
Natao ny fanambarana taorian'ny loza niseho tamin'ny 6 Novambra tao Zushi, Prefektioran'i Kanagawa, izay vehivavy iray no voadaroka totohondry sy novonoin'ny sakaizany taloha, izay fantatra fa nivadika ho mpanorisory taty aoriana.
Nanoratra momba ny zava-niseho ny Habaky ny Tambajotra Mba Hametraka Lalàna Ho Fandraràna ny Herisetra Ara-nofo [ja]:
Araka ny filazan'ny tatitra, in-efatra nangataka fanampiana tamin'ny polisy ilay niharam-boina talohan'ny namonoana azy. Talohan'ny loza niseho, efa nahazo sazy herintaona an-tranomaizina sy sazy 3 taona mihantona ilay mpanorisory izay voampanga ho nanao fandrahonana. Na dia izany aza, mbola nanohy nanorisory tamin'ilay vehivavy hatrany izy rehefa nahazo ilay sazy mihantona. Tamin'ny volana Martsa farany teo, rehefa naharay mailaka 1089 tao anatin'ny 20 andro ity niharam-boina ity dia nangataka tamin'ny polisy mba hanao famotorana lalina, nolavin'ny polisy anefa ny fangatahany noho ireto antony manaraka ireto;
Tsy tafiditra ao amin'ny lalàna mandràra ny herisetra ny fanakanana ny mailaka
Tsy nahitana teny sompirana “famonoana” tao amin'ny mailaka
Noho ireo antony eo ambony ireo, nanapa-kevitra ny tsy hanao famotorona ilay mpanorisory ny polisy, satria tsy misy ifandraisany amin'ny lalàna mandràra ny herisetra na ny fiampangana momba ny fandrahonana ny fitarainany.
Nitady fanovana ifotony tamin'ny alalan'ireto fanambarana manaraka ireto ny vondrona mba haneken'ny polisy ny fisian'ny herisetra :
Tokony hanaraka fiofanana manokana ny polisy rehetra mba hahafantarany mikasika ny heloka bevava mianjady amin'ny vehivavy toy ny herisetra. Tokony karakaraina miaraka amin'ny mpampiofana ivelan'ny polisy ny fiofanana tahaka ireo niharam-boina ohatra, ireo nieren-doza ary ny mpanohana.
Mamoaka boky torolalana ahitana mazava ny tranga tahaka ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy anisan'izany ny fampijaliana, mba hiantohana ny fiarovana ny ankilany voa mafy. Tokony tsy hisaraka amin'ireo polisy mihitsy izany boky izany.
Tokony sokajiana ho anisan'ny asa fampijaliana ny fandrahonana amin'ny mailaka, ka tokony hanome baiko handràra izany ny polisy raha mangataka ny ankilany hiharan'izany, mandràra ireo mpiherisetra tsy hanatona ireo niharam-boina. Ilaina ny fanovana ifotony amin'ny fanaraha-maso ny lalàna mandràra ny herisetra mba hiantohana ny fiarovana ilay ankilany hiharan'ny herisetra.
Tokony itarina avy amin'ny “vady” mankamin'ny “vady sy ny hafa” ny Lalàna Fisorohana ny Hersietra an-tokantrano mba ho tafiditra ihany koa ireo olona manambady sy nananana fifandraisana teo aloha. Tokony hahazoana alalana baiko fiarovana sy rafitra maika sy vonjimaika ny tranga-na fanorisorenana.
Nofaritan'ny andininy faha-6 amin'ny “asam-pitsongoan-dia dia tsy maintsy ao ambanin'ny lalàna hafa ary tsy tokony hanitsakitsaka ny fanirian'ny tsirairay hanana fiainana milamina”. Tokony ataon'ny sampan-draharaham-pitsongoan-dia mazava fa tsy tokony asehon-dry zareo ny adiresin'ny olona tsongoina dia na eo aza ny tinakin'ny mpanorisory na maniraka ny fitsongoan-dia
Rehefa voasambotra noho ny fandrahonana nataony ilay mpamono olona tamin'ny volana Jiona tamin'ny taon-dasa, novakian'ny polisy feno sy tamin'ny feo mafy ny anaran'ilay niharam-boina (izay efa manambady) sy ny adiresiny vaovao izay mety ho nanampy ilay mpamono olona hahalalàny ny trano itoerany taorian'ny mariazy. (Manova ny anarany avy amin'ny anaram-badiny ny ankamaroan'ny vehivavy any Japana aorian'ny fanambadiana.)
Nampiasa ny dinika (forum) an-tserasera hametrahana fanontaniana mihoatra ny 400 tamin'ny alalan'ny kaonty telo samihafa ilay mpamono olona. Ahitana toy izao ao anatin'ny fanontaniana [ja] “Aiza no ahahafako mividy antsin'atsantsa fanao an-dakozia“, ” Inona no mitranga raha mamono tena mialoha ny ahatratrarana azy ny mpamono olona iray“, “Inona sy inona avy ny bus raisiko raha ho any amin'ny faritr'i Kotsubo any an-tanànan'i Zushi aho?”
Nananton-tena ilay mpamono olona rehetra avy nanatsatoka antsy ny lasibatra.
Avy amin'i Keiko Tanaka ny hajian-tsary
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 4 andro izayJapanaNiteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila
4 andro izayMaleziaNahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin'ny Governemanta
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, Ελληνικά, Português, 繁體中文, 简体中文, English
LalànaMediam-bahoakaPolitikaVehivavy sy Miralenta
Tweet Tantara Malaza Indrindra Manerantany 20 ora izayAfrika MaintyMamaly Ny Fanamby Napetrak’ireo Mitovy Aminy Miteny Anglisy Ny Vondrom-Piarahamonina Teknolojika Any Afrika Miteny Frantsay